Maypo Valley, lohasaha Maypo - Pirke
Amerika Atsimo Shily Pirke
Adiresy: Álvarez 441, Isla de Maipo, Región Metropolitana, Chile;
Pejy ofisialy: maipo.travel;
Phone: +56 9 5630 7024.
Ao amin'ny sarintanin'ny mpizahatany ao Chili , ny Lohasahan'i Maipo dia manana toerana manokana: io anarana io dia fanta-daza amin'ireo izay mandray anjara amin'ny fanangom-bokatra.
Ny fitetezana divay any Chili dia mitaky fitarihana avo lenta eo amin'ireo mpizaha tany avy amin'ny firenena samihafa. Ny reniranon'i Maipo, any akaikin'i Santiago , dia faritra iray amin'izany. Tokony ho 200 taona lasa izay dia nisy tompon-tany mpanankarena tao an-tanindrazana nitondra tao amin'ny lohasaha voaloboka avy amin'ny Frantsay Bordeaux. Avy eo dia niorina ny famokarana divay mba hanomezana azy ireo ny fiangonan'ny Eglizy Katolika, taty aoriana tany amin'ny tanimboaloboka dia nosokafana ho tombon-tsoa ara-barotra.
Ny Maipo Valley izao no làlana tena nalaza indrindra any Chile. Ny mpizaha tany dia mitsidika toeram-pivarotana maro, izay ahafantaran'izy ireo ny hafanana amin'ny famokarana ity zava-pisotro ity sy ny fandraisana anjara. Afaka mankafy ireo fomba fijery mahafinaritra amin'ny tanimbolin'ny voankazo manodina ny valan-javaboary Maypole izy ireo.
Ankoatra ny fandraisana anjara amin'ny fitsidihana divay, ao amin'ny lohasahan'i Maipo ao Chili, ireo mpizahatany dia manana fahafahana handeha any amin'ny renirano na fitsangantsanganana eny an-tendrombohitra. Any amin'ny faritanin'i Maypo, ankoatra ny atidoha voajanahary, tokony hahita ny Katedraly San Bernardo (katedralan'i San Bernardo), ny zaridaina sy ny kianja Armory ao Buin.
Ahoana ny hahatongavana any amin'ny Lohasahan'i Maipo?
Ny toerana tsara indrindra hanombohana ny fikarohana ny lohasin'i Maipo dia tanàna kely ao Pirque . Mba hahatongavana amin'izany dia mila mandray ny metro mankany Santiago ianao ary mankany amin'ny fiantsiana Plaza de Puente Alto. Avy eo dia miova ho minivan manga ary miantsoa ny mpamily ny toerana hodiany - Pirke Square na Viña Concha y Toro winery.
Ny Vaton'i El Penion de Guatape
The Museum of History of Cordoba
Ny tsenan'i San Telmo
Art therapy amin'ny kindergarten
Ahoana ny fomba hisarihana namana amin'ny alalan'ny taratasy?
Ny moske Sultan an'i Salahuddin Abdul Aziz
Inona no dikan'ny "olona mandefitra"?
Amin'ny akanjo hikolokolo?
Mofomamy dia tsara sy ratsy
Ora famatsiana mikraoba miaraka amin'ny gilasy sy ny fifandimbiasana
Gisele Bundchen dia nanolotra boky momba ny tenany manokana $ 700
Ny akanjo hariva amin'ny vehivavy
Sary 24 tsy azo tsapain-tanana momba ny zaza vao teraka miaraka amin'ny alika
Ny fiheverana amin'ny lelafo eo amin'ny masiaka
Sagittarius sy Virgo - fifanarahana amin'ny fifandraisana am-pitiavana
Tena mahavariana ny mahandro mofomamy?